၅ နှစ်သမီးလေးကို ပါးစပ်ပိတ်၊ အဝတ်အစားများချွတ်ကာ လုံးထွေးနေချိန် ပက်ပင်းမိ. - Update New
June 10, 2019 Mg Naing ပြည်တွင်းသတင်း 0
၂၀၁၉ ဇွန်လ ၉ ရက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ကိုယ်ရင်လေးတောင် ကွက်သစ် ၈.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် သက်ငယ် မဒိန်းမှု့ဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်း ရရှိပါတယ်။
အဆိုပါအမှု့တွင် အဘ ဦးဖိုးသိန်း အသက်၂၅အရွယ် မောင်ထက်ဆိုသူမှ အသက် ၅နှစ်အရွယ် မ———–အား အရက်မူးကာတောထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အဓ္ဓမပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်တွင် မ———၏အဖိုးဖြစ်သူ မှ မြေးဖြစ်သူအားအိမ်မှာ မတွေ့သ ဖြင့် တောထဲ၌လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ တရားခံ ဖြစ်သူ မောင်ထက် မှ ကလေးငယ်အား ပါးစပ်ပိတ်၊ အဝတ်အစားများချွတ်ကာ လုံး ထွေးနေချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း..
မ———- ၏အဖိုးပြောပြချက်အရသိရှိရပါသည်။ ထို့နောက် တရားခံ မောင်ထက်အား မြေနီတောင် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဇရပ်ကွင်း ရဲကင်းသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ဇရပ်ကွင်း ရဲကင်းမှ ရဲအုပ်မျိုးမင်းလွင်နှင့်အဖွဲ့သည် တရားခံအား သပိတ်ကျင်းမြုိ့နယ်ရဲစခန်း သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တရားခံ မောင်ထက်အား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရွှေပြည်တော် မှု့ခင်းနှင့်သတင်းစုံ ဂျာနယ်
၅ နှဈသမီးလေးကို ပါးစပျပိတျ၊ အဝတျအစားမြားခြှတျကာ လုံးထှေးနခြေိနျ ပကျပငျးမိ.
၂၀၁၉ ဇှနျလ ၉ ရကျ
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊သပိတျကငျြးမွို့နယျ၊ကိုယျရငျလေးတောငျ ကှကျသဈ ၈.၆.၂၀၁၉ ရကျနေ့ ညနေ ၅း၃၀ အခြိနျခနျ့တှငျ သကျငယျ မဒိနျးမှု့ဖွဈပှားကွောငျးသတငျး ရရှိပါတယျ။
အဆိုပါအမှု့တှငျ အဘ ဦးဖိုးသိနျး အသကျ၂၅အရှယျ မောငျထကျဆိုသူမှ အသကျ ၅နှဈအရှယျ မ———–အား အရကျမူးကာတောထဲသို့ချေါဆောငျသှားပွီး အဓ်ဓမပွုကငျြ့ရနျ ကွံစညျခဲ့ပါသညျ။
ထို့နောကျတှငျ မ———၏အဖိုးဖွဈသူ မှ မွေးဖွဈသူအားအိမျမှာ မတှသေ့ ဖွငျ့ တောထဲ၌လိုကျလံရှာဖှခေဲ့ရာ တရားခံ ဖွဈသူ မောငျထကျ မှ ကလေးငယျအား ပါးစပျပိတျ၊ အဝတျအစားမြားခြှတျကာ လုံး ထှေးနခြေိနျတှငျ ရောကျရှိခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး..
မ———- ၏အဖိုးပွောပွခကျြအရသိရှိရပါသညျ။ ထို့နောကျ တရားခံ မောငျထကျအား မွနေီတောငျ ရပျ/ကြေး အုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့မှ ဇရပျကှငျး ရဲကငျးသို့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျ ခဲ့ကွပါသညျ။
ထို့နောကျ ဇရပျကှငျး ရဲကငျးမှ ရဲအုပျမြိုးမငျးလှငျနှငျ့အဖှဲ့သညျ တရားခံအား သပိတျကငျြးမွို့နယျရဲစခနျး သို့ပို့ဆောငျခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါ တရားခံ မောငျထကျအား ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆/၅၁၁ ဖွငျ့တရားစှဲဆိုထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။